Amin'ny alàlan'ny mpanamboatra fitaovana sy mpamatsy - China By Material Factory
BOTOTRA ＆PACKAGING, INC
Amin'ny alàlan'ny Material
Kitapo Ball Roller
Caps sy Closures
Fanoherana ny zaza
Paompy sy Sprayera
Toro lava lava
Serivisy sy loharano
Fialana fisedrana ny fitiliana ny tavoahangy sy ny vokatra
Tavoahangy boribory PET 7 oz misy famaranana amin'ny vozona 38-410
Tavoahangy HDPE 1.7 oz mainty vita amin'ny vozona 12-410
Tavoahangy ranon-tsakafo PETG 17 Oz mavokely misy 28-410 ...
Tavoahangy heksagon PP 2 oz fotsy misy famaranana hatoka 34-400
0.4 oz mazava PMMA (Acrylic) tavoahangy vava plastika feno fonony miisa 22-400 vita amin'ny vozony
0.4 grama mazava plastika PMMA (akrilika). Ny tavoahangy kapsily madinidinika dia afaka manao akanjo mitambatra, ny fijerin'ny maso ny rindrina tavoahangy plastika matevina dia avo lenta. Afaka mametraka dite, fanafody avo lenta, fanafody raokandro sinoa ary vokatra vokatra hafa. azo entina manodidina ny fatra. Ny famolavolana fonosana avo roa heny, amin'ny alàlan'ny fonony mangarahara ivelany dia afaka mahita ny fonony voaravaka volamena, ny fonony ivelany ary ny vatan'ny tavoahangy ao anaty endrika iray. ny marikao.
Tavoahangy feno volo plastika PMZ (Acrylic) 6 oz mazava miaraka amina tendany 44-410
Tavoahangy plastika misy fonosana metaly mangarahara. Ny endrika tavoahangy vita amin'ny tavoahangy, ny vatan'ny kapsily sy tavoahangy tavoahangy dia mitazona ny savaivony mitovy, ny vatan-tavoahangy mangarahara ary ny rindrina tavoahangy plastika matevina no mahatonga ny vokatra ho hita maso tsara kokoa. Fitsaboana sinoa, vokatra ara-pahasalamana, sns. Ny vavan'ny tavoahangy dia voaisy tombo-kase amin'ny alikaola vita amin'ny alimo vita amin'ny alimo mba hiantohana ny valin'ny famehezana 100%.
3-5ml loko syringe tsindrona PP fisaka voajanahary
Ny fantsom-bolan'ny Applicator misy loko 3 / 5ml dia vita amin'ny fitaovana PP, izay misy tombo-kase sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanindronana gel gel. Ny fantsom-pandrefesana dia fantsom-boribory kely savaivony, ary ny vatan'ny fantsom-batana dia noforonina arakaraka ny fahazarana fampiasana isan-karazany ary mila manome anao fahatsapana tanana tsaratsara kokoa sy fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina. Tube fitsapana manokana
3-5ml mangarahara voajanahary plastika tsindrona syringe
Ny 3 / 5ml Vaginal Applicator antsika dia vita amin'ny fitaovana PP, izay misy famehezana sy fahamendrehana tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanindronana gel gel. Ny fantsom-pandrefesana dia fantsom-boribory kely savaivony, ary ny vatan'ny fantsom-batana dia noforonina arakaraka ny fahazarana fampiasana isan-karazany ary mila manome anao fahatsapana tanana tsaratsara kokoa sy fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
3ml mavokely PP Vagino-anal dispenser fanafody
Ny Tube Tube Gel vacuum 3ml anay dia vita amin'ny akora PP, izay misy famehezana sy fahamendrehana tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanaterana zava-mahadomelina gel. Ny fantsona dia fantsom-boribory boribory kely. Ny famolavolana endrika mahazatra dia afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy ny valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
5ml bule syringe tsindrona PP voajanahary
Ny 5ml bule fivaviana / anus syringe antsika dia vita amin'ny fitaovana PP, izay misy famehezana sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanindronana gel gel. Ny fantsona dia fantsom-boribory boribory kely manana vatana somary mahia. Araka ny fahazarana sy filan'ny fampiasana isan-karazany, dia afaka manome anao fahatsapana tanana tsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
5ml voajanahary PP Vagino-anal dispenser
Ny syringe gel 5ml anay dia vita amin'ny akora PP, izay misy famehezana sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanaterana zava-mahadomelina gel. Ny fantsona dia fantsom-boribory boribory kely. Afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
5ml mavokely PP Vagino-anal dispenser fanafody
Ny plastice mpangataka fivaviana 5ml anay dia vita amin'ny fitaovana PP, izay misy famehezana tsara sy malama kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanaterana zava-mahadomelina gel. Ny fantsona dia fantsom-boribory boribory kely. Ny famolavolana endrika mahazatra dia afaka manome anao fahatsapana tsara kokoa sy ny valin'ny fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
0,3 0,5 oz fotsy HDPE tavoahangy mitete volo miaraka amina hatoka 8-400
Manana habe roa izahay ho an'ity tavoahangy solomaso plastika ity: 0.3oz / 8ml ary 0,5oz / 15ml. Ny tavoahangy dispenser dia mitete amin'ny fitaovana HDPE. Ny tampon'ny tavoahangy dia azo atao pirinty na voadidy amin'ny dity. Ny fango namboarin'ny orinasanao dia azo namboarina mba hanatsarana ny vokatry ny orinasanao. Ny endriny ankapobeny amin'ny tavoahangy plastika dia mifatotra, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. Ny fonony dia mandray ny fonony misy ny kofehy sy ny plug-by azo antoka fa 100% ny famehezana ny vokatra. Azo ampiasaina amin'ny fitoeran-dranomaso, fonosana menaka manitra, tavoahangy fonosana sigara elektronika, tavoahangy mitete maso, tavoahangy mitete maso.
5ml mangarahara syringe tsindrona PP voajanahary
Ny vaksinay 5ml / anus syringe dia vita amin'ny fitaovana PP, izay misy famehezana sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanindronana gel gel. Ny fantsona dia fantsom-boribory boribory kely manana vatana somary mahia. Araka ny fahazarana sy filan'ny fampiasana isan-karazany, dia afaka manome anao fahatsapana tanana tsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
5ml mangarahara PP mpamindra zava-mahadomelina lava anal
Ny Tube Tube 5g Vaginal antsika dia vita amin'ny fitaovana PP, izay misy famehezana sy malama tsara kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fanaterana zava-mahadomelina gel. Ny fantsona dia fantsom-boribory boribory kely manana vatana somary mahia. Araka ny fahazarana sy filan'ny fampiasana isan-karazany, dia afaka manome anao fahatsapana tanana tsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. Rehefa mampiasa, ny dingana voalohany dia ny manala ny fonony aloha sy ny fonony aoriana, ny dingana faharoa dia ny fanondranana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fivaviana na ny nosy, ary ny dingana fahatelo dia ny fampiasana ilay fonony lava mba hanosehana ny tehina fanosehana ao anaty fantsona hanosika ny zava-mahadomelina ao amin'ny fantsona mankany amin'ny fivaviana na amin'ny nosy. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fanolorana zava-mahadomelina amin'ny fivaviana, fikolokoloana fivaviana, fanaterana fanafody anal, ary fonosana fikolokoloana. Mora entina sy ampiasaina izy io. Ny mpangataka antsika amin'ny fivaviana dia vokatra fonosana indray mandeha ary azo afangaro aseptically. Raha manana endrika tsara kokoa ianao dia afaka manome anao fanodinana namboarina.
Tavoahangy fitetezana HDPE 1.7 oz mena miaraka amina vozona 12-400
Ny tavoahangy mitete mena 50ml anay dia vita amin'ny fitaovana HDPE. Ny tavoahangy dia fisaka. Ny tampon'ny tavoahangy dia azo atao pirinty na voadidy amin'ny dity. Afaka manamboatra ny sary famantarana ny orinasanao, manatsara ny vokatra marika an'ny orinasanao. Ny endrik'ilay tavoahangy plastika amin'ny ankapobeny dia feno, manome anao traikefa mahatsapa tanana tsaratsara kokoa sy ny valin'ny fampisehoana talantalana. Ny satrony tavoahangy dia manisy satroka visy sy tombo-kase mba hahazoana antoka ny famehezana 100% ny vokatra. Azo ampiasaina hanaparitahana sy hitehirizana ny ankamaroan'ny rano. Tsara ho an'ny solvents, menaka maivana, loko, fotony, sigara elektronika, solika, masira, sns.
Inona no bobongolo mangatsiaka tsy misy mpihazakazaka
Amin'ny ankapobeny, amin'ny dingan'ny famolavolana tsindrona, ny fitaovana an-idina avy amin'ny noza ao anaty lasitra, amin'ny alàlan'ny fantsona lehibe, ny fantsona fanodinana ary ny vavahady mankamin'ny lavaka, ary amin'ny fihenan'ny plastika bobongolo, ny fanamafisana ao anaty fampangatsiahana, ary ny vokatra misy fehikibo. Noho izany, rehefa miditra amin'ny sekona ...
Fambolena indostrialy fonosana fanafody, Town Lupu, County Yuhuan, Faritanin'i Zhejiang, Sina